Global Voices teny Malagasy » Tontolo Arabo: Taona Iray An-ttsary – Ny Fantin’ireo Mpanoratray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Janoary 2012 8:25 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Libanona, Libia, Maraoka, Palestina, Syria, Tonizia, Yemen, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Saripika, Tanora, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Hatramin'ny nandoroan'ilay Tanora Toniziana, Mohamed Bouazizi , mpivaro-boankazo ny tenany tao an-tanàna kelin'i Sidi Bouzid tamin'ny Desambra 2010, dia onjam-panoheram-bahoaka iray tsy mbola nisy toy izany no nitsoka tany amin'ny tontolo Arabo. Nanatri-maso hetsika tsy mbola fahita sy tsy nisy noeritreretiny ny hatrehana mihitsy teo amin'ny fiainany ny tsirairay.
Ity sary avy amin'i Sanabis Voice  ity dia maneho ireo fononà baomba mandratsa-dranomaso avy nampiasaina, nangonina tamin'ny faritra kely iray, tao anatin'ny andro iray. Sary toy itony no hita mameno ny aterineto, ifampizaràn'ireo mpiondana aterineto any anaty tambajotra sosialy any, ary milaza tantara iray izay marina nandritra ny 11 volana – tantara iray tsy dia nahataitra loatra an'izao tontolo izao.
Ilay ankizivavikely miandrandra mijery ity Superman Maraokana miantrana manoloana ny parlemanta ity dia tahaka ny manontany tena raha afaka manidina ilay zalahy io. Mety ho ‘ultra-nationaliste’ miezaka manangona isa ve izy? Na angamba mety ho mpanohana ny vondrona 20 Febroary mpandàla ny fanovàna? Tsy dia olana izany. Satria ao ambadik'io sary mahatsikaiky avy amin'i Amine Hachimoto  io no misy ny tena zava-marina iainana ao Maraoka : 2011 no taona nampanjary ho sehatry ny fanehoan-kevitra politika tam-pilaminana ny arabe. Zavatra izay toa mbola hitohy amin'ity taona vao miandoha ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/04/27162/
 Hetsi-panoherana Maraoka 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/morocco-protests-2011/
 Revolisiona Tonizian 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/tunisia-uprising-201011/
 Hetsi-panoherana Yemen 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/yemen-protests-2011/